सपनाबाट ब्युझिएको थानेदार | Kendrabindu Nepal Online News
18805392 706445 6121553 11977394
सपनाबाट ब्युझिएको थानेदार
२० मंसिर २०७५, बिहीबार १३:३३
कार्यालय प्रवेशद्वारमा मेरा कदम रोकिन पुगे । सेवाग्राहीहरुको भीड थियो । उनिहरुको वरिपरि म घेरिएं । पछाडिबाट अरुलाई छिचोल्दै एकजना भद्र व्यक्ति मेरो सामु आइपुगे र अनुहारभरिको चोट अनि वग्दै गरेको आलो रगत देखाएर आवेश मिश्रित लवजमा भन्न थाले ‘घरै अगाडिको मदिरा पसलमा सधै जसो हुने गरेको झगडा र अश्लिल शव्द सहन नसकेर सम्झाउन गएँ, उल्टै मेरो यो हालत भयो हेर्नुस त’ ।
उहाँसँग दोहोरो वार्तालाप हुन नपाउँदैं छेउमै उभिएकी महिलाको रोदनसहितको निवेदनले मलाई आकर्षित गर्‍यो । नशालु श्रीमानको यातना र दुव्र्यवहारको पीडा पोख्दै थिइन् । शव्द संगै अश्रुधारा पनि वग्दै थिए आँखाबाट । फेरि व्यापारी सेवाग्राहीले चोरिएको आफ्नो मालसामानको वापसी र चोरलाई कारवाहीको लिखित व्यहोरा पेश गरे ।
त्यहा आउने सवैको आ–आफ्नो कथा व्यथा थियो । अनि शान्ति सुरक्षा र प्रहरी कारवाहीको अपेक्षा पनि थियो त्यो पनि सकेसम्म छिटो । कार्यालयमा प्राय जसो देखिईरहने यस्तो दृश्यको क्रम रोकिने लक्षण देखिदैन । सेवाग्राहीको भीड घट्ने हैन दैनिक बढ्दो छ ।
सेवा र सुरक्षाको अपेक्षामा वेचैन सेवाग्राहीको बढ्दो संख्या देखेर केहि गरी छोड्ने अठोट जागेर आयो । कसरी शुरु गर्ने र के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न पनि सेवाग्राहीकै मत लिने रणनिति बनाएँ । उहाँहरुको समस्या तत्काल सुनुवाई गरिने भरोसा दिलाउदै सबैलाई कार्यकक्षमा जम्मा गरे । योजनाको शुरुवात मेरो प्रश्नबाट भयो ।
‘तपाईहरु झ्यालढोका खुलै छाडेर चैनले निदाउन चाहानु हुन्छ ?’ स्तव्ध भयो वातावरण । न कुनै समर्थन, नकुनै प्रतिक्रिया । प्यासले छटपटिएर तत्काल एक गिलास पानीको याचना गरिरहेको प्यासालाई कालान्तरमा झरना ल्याइदिने आश्वासन बाडे झै असान्दर्भिक भयो मेरो प्रश्न । छोटो मौनता तोड्दै तिनै भद्र व्यक्तिले आक्रोश पोखे ‘झ्याल ढोका बन्द गर्दा त यस्तो अवस्था छ, अझ खुल्लै छोडिदिएर सुत्ने हो भने हालत के होला ? हैन यो के भन्नु भएको थानेदार साब ?’ मेरो अघोषित योजनाको लक्ष्यमा सहमत गराउन फेरि अघि बढे ।
‘हेर्नुस हाम्रो लक्ष्य र तपाईहरुको चाहना एउटै हो, अमन चयन । शान्ति सुरक्षा कायम नभइ अमन चयन आउँदैन् । यसको लागी प्रहरी चिन्तित मात्र छैन अहोरात्र सक्रिय पनि छ । अपराधीहरु कारवाहीमा परी नै रहेका छन् । विभिन्न योजना र कार्यक्रम मार्फत तपाइहरुको सेवामा संगठन लागिनै रहेको छ । तर पनि शान्ति र सुरक्षा मृग तृष्णा झै बन्दैछ किन होला ?’ प्रतिक्रियाको पर्खाइमा केहि वेर अडिएं ।
मुखामुख गरिरहेका नागरिकहरुलाई नियालिरहें । मेरो अनुमान सहि सावित हुँदैं थियो । केहि आशा र केही आवेश शब्दमा व्यक्त भए तिनै पिडित महिलाबाट ‘त्यो त तपाईहरुलाइ नै थाहा होला नि, समाजमा निस्फिक्रि घुमिरहेका अपराधी र फटाहाहरुलाई तपाइले चिन्नु भएको छैन र ?’ केहिवेरको सवाल जवाफ पश्चात हाम्रो वार्तालाप सामान्य र सौहार्द्र हुँदैं गयो ।
यो अवसरलाई गुम्न नदिइ मैले अशान्तिको कारण र सामाधानको दिगो योजना सुनाउँदा जुन एकाग्रता छायो, यसलाई मैले नागरिकको म प्रति समर्थनको रुपमा बुँझे । र शुरु भयो नागरिक प्रहरीको सहयात्रा ।
तिव्र गतिमा शहरीकरण तर्फ उन्मुख भइरहेको मेरो कार्यक्षेत्र केहि वर्ष अगाडि सम्म मनोरम प्राकृतिक दृश्य सहितको गाउँ थियो । दैनिक थपिने गरेका घरहरुका कारण अव त्यो सुन्दरता दन्त्य कथामा परिणत हुँदैंछ । गाउँले आत्मियता र एउटै परिवारजस्तो समुदायको लोभलाग्दो कहानी सुनाउने अग्रजहरु अझँ छदैंछन् । तर त्यसको अनुभुति भने दुर्लभ हुँदैं गएको छ ।
गाउँलेको मनमा बसेको कर्तव्य, इमान्दारिता र स्वाभिमानको अलिखित वोध आजको लिखित कानुन र अधिकारका ठेली भन्दा कम थिएन, शान्ति सुरक्षाको सवालमा । तर त्यसको ठाँउ शहरी व्यस्तता र एक्लो उपभोक्तावादी जिवनशैलीले लिइसकेको छ ।
गगनचुम्वी महलहरुका विचको साँघुरा गल्लिहरुमा तिनजना सवार भएर कोलाहल मच्चाउँदैं धुलो उडाउँदैं बेतोडले मोटरसाईकल चलाउँदैं हिडिरहेका युवाहरु जताततै भेटिन्छन । अश्लिल शव्द तिनका मुखैमा झुण्डिएको हुन्छ । लागुऔषधको गन्ध तिनको वरिपरि फैलिरहेको हुन्छ । जताततै खुलेका खाजाघर र रेस्टुरेन्टहरुमा कामुकता छर्दै अर्धनग्न युवतीहरु भित्र बाहिर गरिरहेका भेटिन्छन ।
चर्को आवाजमा वातावरण प्रदुषित हुनेगरी घन्किएका संगतिले आनन्द कसैलाइ दिदैन तर बजिरहेका हुन्छन् । मदिरा प्राय घरै पिच्छे पाइन्छ । मानिसहरु सम्पत्ति, यौन र मदिराको लागी अनुशासन नैतिकता मात्र हैन पारिवारिक दायित्व समेत दाउमा राख्न तयार हुन्छन ।
अपराधै गर्नुपरे पनि गर्छन र गरिरहेका पनि छन । परिणाम स्वरुप घरेलु हिंसा, लागु औषध, गुण्डागर्दीले जरा गाड्दै गरेको महसुस जो सुकैले पनि गर्न सकिन्छ । हामीले गस्ति गरिरहने वस्ति पनि त्यहि हो ।
यो प्रवृत्तिलाई रोकौ भने स्थापित झै दैखिन्छ र समाज यसैमा अभ्यस्त भइसकेको छ । नरोकौ भने देखादेखी अपराधको भ्रुण तयार हुँदैं गरेको यो अवस्था, कसरी हेरिरहनु ? अन्त्यमा कर्तव्य पालनमा सम्झौता नगर्ने अठोट गरियो । र थालियो नयाँ सुरक्षा अभियान ।
कुनै तिलस्मी योजनाले मात्र शान्ती आउँदैन् । अब शान्तीमैत्री जिवनशैलीको टोलवासीलाई अयास गराउनु छ । अभ्यासबाट परिश्रम गर्ने, सदाचार अपनाउने र स्वाभिमानी बन्ने स्वभाव बसाल्नु छ । स्वभावले दृष्टिकोण र दृष्टिकोणले परिवर्तन गर्ने अभियानको थालनी यसरी गरियो ।
प्रत्येक टोलमा तिन–तिन वटा पार्क तयार गरियो । पहिलो पार्कको नाम थियोः–परिश्रम पार्क । टोलवासीले यो पार्कमा दिनको एक घण्टा विताउनै पथ्र्यौ । फुल रोप्ने, फल रोप्ने चौतारा बनाउने सजाउने र सुन्दरता थप्ने काम प्रत्येकले गर्नैपर्ने हुन्थ्यो । पसिनाले भिजेर मात्र त्यहाबाट वाहिरिनु पर्ने हुन्थ्यो । पार्कमा नआउने र परिश्रम नगर्नेहरुको अभिलेख राखिने गरिन्थ्यो ।
अर्को थियोः– प्रेम पार्क । हिंसा, प्रतिशोध, उत्तेजना, अभिमान त्यागेर पार्क भित्र प्रवेश गर्नैपर्ने, वाहिरिदा प्रेम, सदाचार र सरलता ग्रहण गर्नैपर्ने हुन्थ्यो । यो पवित्र पार्क भित्र प्रवेश नगर्नेहरु अभिमानी, कामुक र व्यभिचारीको रुपमा एक्लिनुपर्ने हुन्थ्यो । प्रत्येक टोलवासीले एकघण्टा यो पार्क भित्र विताउनुपर्ने हुन्थ्यो । हिंसा र प्रतिशोध विरुद्ध सार्वजनिक प्रतिवद्दता व्यक्त गरेर मात्र वाहिरिनुपर्ने हुन्थ्यो ।
तेस्रोः– पार्कमा सामाजिक कर्तव्य, मानवीय कर्तव्य र पारिवारिक कर्तव्य निर्वाहका कथाहरु पढ्न पाइन्थ्यो, ऐतिहासिक व्यक्तित्वका गाथाहरुको हेर्न लायक दृश्य सजाइएको थियो । तिनका प्रतिमा र सन्देशहरुले पार्क सजिएको थियो । कर्तव्यको दुनिया नै बनेको थियो र कर्तव्यबाट विचलित हुनेहरुलाई त्यहाको वातावरणले उपहास गरिरहेको हुन्थ्यो । यो पार्कको नाम थियोः– कर्तव्य पार्क ।
समुदायका वासिन्दाले आफ्नो दैनिक रुटिनमा तिन वटै पार्कमा जाने र त्यहाको अभ्यास गर्नुपर्ने समय निश्चित गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यसको अवज्ञा गर्न नपाइने गरी आचार संहिता बनाइयो र त्यसो गर्नेहरुको अभिलेख राख्न शुरु गरियो ।
नागरिकले यसको निगरानी र प्रहरीले कारवाही गर्ने काम जोडतोडले थालियो । नागरिकहरुको बढ्दो सहभागिताले हाम्रो जोस दुइगुना हुने नै भयो । यो अनिवार्य नियम उल्लंघन गर्नेहरुको संख्या क्रमश घट्दै गयो । कार्यक्रम जारी रह्यो ।
अवधि लामो भइसकेको थियो । किन हो नागरिकहरु कार्यालयमा आउने क्रम भने अनपेक्षित रुपले घट्दै गइरहेको थियो । कुनै अप्रिय परिस्थिति त सृजना भएन ? यस्तै आशंकामा रुमलिदै गरेको मनस्थिति लिएर महिनौपछि पुन गस्ति गर्न लागियो सोहि वस्ति तिर । हामी जति जति त्यो टोल भित्र प्रवेश गर्दै गयौं हाम्रो विगतको अनुभुतिमा त्यति नै फरक हुँदै गएको पाईयो । टोल शान्त थियो ।
मानिसहरु हार्दिकता पुर्वक प्रस्तुत भइरहेका थिए । सवारी साधनहरुको व्यवस्थित पार्किङले सडक र बजारको सुन्दरता हेर्नलायक थियो । सरसफाइमा उल्लेखनिय प्रगति थियो । फेरि उनै भद्रव्यक्ति सँग साक्षत्कार हुन पुग्यो । अभिवादन पश्चात मैले वोल्नै नपाई भर्खरै गरेको कालोपत्रे सहितको सडक देखाउदै उनैले प्रश्न सोधिहाले ‘यो दुई महिनाविच मै यो बाटो कसरी कालो पत्रे भयो थाहा छ थानेदार साहव ?’ मैले केहि कुरो बुझ्नै पाएको थिएन उत्तर पनि उनैले दिइहाले, ‘टोलवासी सवैले मदिरा सेवन त्यागिदियौं । अनि त्यसैको पैसाले यो वाटो कालो पत्रे गर्यौ ।’
युवाहरु आफु मात्र फेरिएको हैन समाजलाई नै सकारात्मक परिवर्तन गराउन कम्मर कसेर लागिपरेको लामो वेलिविस्तार सुनाई रहे । टोलवासीहरुले पार्कको भावना बमोजिम घर घरमै परिश्रमको, प्रेमको र कर्तव्यको फुलवारी बनाएका रहेछन । परिश्रम नगर्नेहरु, सदाचार नभएका व्यभिचारीहरु र नागरिक कर्तव्यबाट विचलित भएकाहरु या त सुध्रिई सकेका थिए या त विस्थापित भएसकेका रहेछन् । तर लम्विदै गएको भद्र व्यक्तिसँगको वार्तालापलाई विट मार्ने गरी मैले सोधें, ‘अब अरु के छ त ?’ उनले पनि निर्णायक लवजमा उत्तर दिए, ‘थानेदार साहव आज भोलि टोलवासीहरु झ्याल ढोका खुलै छोडेर चैनको निद्रामा निदाउने गर्छन्’ भद्र व्यक्तिको अभिव्यक्तिले म निरुत्तर भएं ।
कार्यालयमा सेवाग्राहीहरु घट्नुको कारण पार्कले ल्याएको सकारात्मक जिवनशैली नै हो भन्नेमा म विश्वस्त हुन पुगें । कार्यक्रम सफल भएको कुरा कमाण्डरमा जाहेर गरें ।
धन्यवादसहित मेरो रोकिएको विदा स्वीकृति भएको जानकारी पनि पाइयो । विदामा घर जाने र घर पुग्ना साथ प्राप्त हुने श्रीमतीको सामिप्यताको कल्पनाले रोमाञ्चित हुदै प्रस्थान गर्नै लागेको थिए । निद्राबाट झल्यास्स बिउझिन पुगे । विहानको ७ वजिसकेको रहेछ । मोवाईल लगातार बजिरहेको थियो ।
फोन रिसिभ गर्नासाथ ड्युटी अफिसरले रातको विवरण पेश गर्यो, चोरी–२ वटा, झै–झगडा–२ वटा, बलात्कार एउटा, घरेलहिंसा…………। सपनाको आकाशबाट एकैचोटी विपनाको धरातलमा आइपुगें । हतार हतारमा तयार भए र घटनास्थलतिर हानिएं । म बाहिर निस्कदै गर्दा सेवाग्राहीहरु हात हातमा निवेदन बोकेर कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न थालिसकेका थिए ।
DSP, nepal police, परिश्रम पार्क, पार्क, शान्ती
Prevदुई अमेरिकी जहाज ठोक्कियो
अब विद्यालय तहको शिक्षामा चिनियाँ भाषा पनि समावेश गरिनेNext
औषधि किनेर फर्केकालाई प्रहरीले कुटे (भिडिओ)
बेरुजु फर्छ्यौटमा नेपाल प्रहरी उत्कृष्ट
नेपाल प्रहरीमा ३ एसएसपीसहित साढे ३ हजार दरबन्दी थपियो
२३ अर्बको तमसुक, हतियार र सुनसहित धनगढीमा ३ जना पक्राउ
जब प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको मोटरसाइकल चोर स्थानीयले भगाए